လေနုအေး: မောင်နဲ့ ကျွန်မ
Posted by တန်ခူး at 10:15 PM
အမရေ ... ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာ ကောင်းလိုက်တာ ။ သားလေးတယောက်ရပြီးတဲ့ထိ ခုလို နူးညံ့တဲ့ romance မျိုး အားကျပး) အသွင်မတူ အိမ်သူမဖြစ်ဆိုတာ အမတို့အတွက်တော့ မှားတယ်ပေါ့နော် ။
ဒါနဲ့ အမလို မာလကာသီးစားရင် သစ်ပင်ပေါ်တက် ခူးစားတာကိုလည်း ကျမက ကြိုက်တယ် ။ ဒါကြောင့် အင်ဂျင်နီယာဖြစ်လာကြတာလား မသိး)
ိအဲဒါကို ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရင် အမ သိပ်ကံကောင်းပါတယ်...။
နားလည်မှူက အရေးကြီးဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်...။
သိပ်ကံကောင်းတဲ့ အမတို့ မိသားစုပဲ...။
ရာသက်ပန် အိုအောင်မင်းအောင် ငြိမ်းချမ်းစွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့.....ဆုတောင်းပေးပါတယ်
မတူလေသူနှစ်ဦးရဲ့ ပေါင်းစည်းမှုပေါ့တန်ခူးရေ….“မောင့်”အကြောင်းကို ပိုသိလိုက်ရလို့ ပိုသဘောကျသွားပြီ။
အစ်ကို့စရိုက် အေး၂ဆေး၂ လေးကိုလည်း သဘောကျတယ် အစ်မလို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတော်တဲ့ သူကိုရထားတာ ကံကောင်းတာပေါ့ အသွင်မတူပေမယ့် ဒီအိမ်သူ အိမ်သားတွေရဲ့ ချစ်ခရီးလေးက နုညံ့နေတယ်း)
အကြိုက်ချင်းညီဖို့ ထက် အချစ်ချင်းညီဖို့ ...
နားလည်မှုချင်းညီဖို့ က အရေးအကြီးဆုံးပါ တန်ခူးရေ...
သာယာချမ်းမြေ့တဲ့ မိသားစုလေးတစ်ခု ချစ်ခြင်းတွေ နှစ်တစ်ရာတိုင် တည်တံ့ခိုင်ကြည်ပါစေ..။
P.S. သက်ဝေတို့ လဲ ရုပ်ချင်း လားလားမှ မဆင်ပါလေ..။
ကြည်နူးစရာလေးဗျာ.. အားကျတယ်ဗျို့ :)
အသွင်မတူတဲ့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် said...
ကျွန်တော်တို့လည်း အဲဒီလိုပဲ … မတန်ခူးရေးထားတာ ကြည်နူးဖို့ ကောင်းတယ်။ Link ပေးချင်လို့ Name-URL နဲ့ Comment ပေးခဲ့တာပါ။ ခင်မင်လျက် - Andy
ဖတ်ရတာ တကယ် ကြည်နှုးစရာလေးပါ။ ကျန်တဲ့ အသွင်မတူပေမယ့် နှစ်ဦးသား ချစ်ခင်မြတ်နိုး နားလည်နေတာက တူနေတာကိုး…
မတန်ခူးရေ.. ဖတ်ရတာရော ရေးထားတာပါ ကောင်းလွန်းလို့ ... စာဖတ်ရင်းကလည်း ကိုယ့်အဖြစ် ကိုယ်တွေးနေမိသေးတော့တယ်.. ကျနော်လည်း စကားများပြီး မာလကာပင်ပေါ်တက်ရတာ သဘောကျလို့.. :D
အမပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတာတော့ လက်ခံတယ် သိလား။ လူချင်းမမြင်ဖူးပေမယ့် blog ပေါ်မှာတင် အမကို ခင်တယ်.. ပြီးတော့ မတန်ခူးတို့ရဲ့ မိသားစုဘ၀လေးကို အားကျတယ်.. :)
အမေက ချွေးတပြိုက်ပြိုက်ကျနေပြီး ယပ်တောင် တဖျတ်ဖျတ်ဖြစ်နေချိန်မှာ အဖေက စောင်ခြုံပြီး ဟပ်ချိုးတွေ ဆက်တိုက်ချေ နေတဲ့ မြင်ကွင်းလေးကို ပြန်မြင်ယောင်သွားတယ်…
Enjoy reading it. Asamarried couple, you complement each other.
အား... တယ်လည်းအားရစရာ ချစ်ခြင်းကမ္ဘာလေးပါပဲ။ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်ဖွယ် မိသားစုလေးအဖြစ် ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
အမတန်ခူးရေ အားကျတယ်ဗျာ။ ရေးထားတာကလည်း ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ နောင်များမှ ကိုဇနိဆီက ဂစ်တာတီးသံ နားထောင်ကြည့်အုံးမယ်အမရေ။
အရမ်း ကြည်နူးစရာ ကောင်းမယ့် မေတ္တာရိပ်မြုံလေးပဲနော်း-)
အဲဒါ- opposite attraction ဆိုတာမျိုးလား မသိနော်။ တော်၂ များများ အတွဲ တွေ..ဒီလိုချည်းပါပဲ။ ကိုယ်တိုင် အပါအ၀င်ပေါ့ ။း)
Yoe Yar said...
I really appreciate your life..
I hope to getaGF like this too.
Pls pray fro me.
ဟုတ်ပါတယ်ဂျစ်ရယ်… အသွင်မတူအိမ်သူမဖြစ်ဆိုတာ တို့ နဲ့ ကျတော့ လုံးလုံးကြီး လွဲတော့တာပဲ… ဟိဟိ… ဒါကြောင့်အင်ဂျင်နီယာမတွေဆို လန့် ကြတာနဲ့ တူတယ်…
ကျေးဇူးပါ မြတ်နိုးရေ… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ…
ကိုပေါရေ… သူကတော့သူ့ အကြောင်းတွေ ဖေါ်ကောင်လုပ်လို့ စိတ်တွေဆိုးနေလေရဲ့…
ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ သက်ဝေရေ…. သက်ဝေတို့ လဲ ရုပ်ချင်းမဆင်ဘူးဆိုတော့ တို့ နဲ့ တူတာပေါ့နော်…
ကျေးဇူးပါ mtjရေ… ခုလို လာလည်တာ ကျေးဇူးနော်… နောင်လဲ လာလည်ပါဦးနော်…
အဲဒီပို့ စ်လေးကို ကြိုက်တယ်…ဒီကလည်းကိုအန်ဒီတို့မိသားစုလေးကို ကြိတ်ပြီး အားကျနေတာ… ခုလို လာလည်တာ ကျေးဇူးနော်… နောင်လဲ လာလည်ပါဦးနော်…
ဟုတ်ပါလိမ့်မယ် ကိုပီတိရေ… တခုခုကတော့ လျို့ ဝှက်စွာတူညီနေလို့ ပေါ့နော်… ခုလို လာလည်တာ ကျေးဇူးနော်… နောင်လဲ လာလည်ပါဦးနော်…
နုရေ… ဒါကြောင့်လဲ မြန်မြန်ကြီး ခင်မင်သွားတာ ထင်တယ်… ပုံစံချင်းတူလို့ လေ… အားကျရင် လူဦးရေတိုးတော့လေ… နောက်တာနော်…
အိမ့်ရေ… ဟိဟိ… အိမ့်ဖေနဲ့ မေလဲ အဲလိုလေးတွေ ရှိတယ်လား…
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ ကိုတားမြစ်ထားသောရေ… ကျေးဇူးနော်…
ကိုဇနိလဲ ဂီတာတီးတယ်လား… ဂီတာသံကလဲ မြန်မာပြည်ကို အလွမ်းပြေစေတယ်…
အင်း… တခါတလေကျတော့လဲ တိုက်ပွဲတွေရှိတာပေါ့… လျှာနဲ့ သွားလေ ကောင်းကင်ကိုရေ….
မကေပြောတာ ဖြစ်နိုင်တယ်နော်… မကေတို့ လဲ တူတူပဲလား… ရေးပါဦး… ဖတ်ချင်လို့ …
ဟိဟိ မောင်နဲ့ ကျွန်မကို ခုမှ ပြန်ဖတ်ရတယ်။
အဲဒီတုန်းက မဖတ်ခဲ့မိတာလား မေ့သွားတာလား မသိဘူး။
မတူတာတွေရှိသလို တူတာတွေလဲ ရှိတာပေါ့နော်။
ဒါဆို ဘဲစားဘဲချေပဲ။ :)
မ-က ကံကောင်းတယ်နော်။ ဒီလို အိမ်ထောင်ဖက်မျိုးရတာ။
မ-နဲ့ အတင်းလိုက်တူရရင် ပုရစ်ကြော် ကြိုက်တယ်။
မရဲ့ မောင်-နဲ့ အတင်း လိုက်တူရရင်တော့ ဧည့်သည်တွေ ဧည့်မခံချင်တာ။ နောက်ဘက်မှာ ဘာလုပ်ရလုပ်ရ။ :P
ဒီမှာလည်း တပြုံးပြုံးနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်း))
Very touching story andagood miss-match to complete the harmony. Bigger heart, mutual understanding is the most and effective to bring this kind of life to love each other.
Sorry for not typing in Myanmar since I don't know how to type in Myanmar.
Hope every couple can live together in harmony.